Ireo Mpanoratra Mampiroborobo ny Literatiora Venezoeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2012 3:29 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Català, English
Ity lahatsoratra ity no farany amin'ireo fizarana roa tamin'ny resadresaka niarahantsika tamin'ilay mpanoratra, Guillermo Parra Venepoetics, momba ny literatiora Venezoeliana (amin'ny aterineto sy ivelan'ny aterineto) sy ny fandikàny ny haisoratr'i Jose Antonio Ramos Sucre.Afaka vakianao eto ny lahatsoratra tamin'ny voalohany.
Nandritra ny fizarana voalohany tamin'ny resadresaka, nilaza tamintsika momba ny traikefany amin'ny tononkalo Venezoeliana i Guillermo Parra, ary koa ny fifandraisany amin'ny hetsika vaovao noho ny fisian'ny fampahalalam-baovao sosialy, sy ny fandraisany anjara amin'izay sokajiana ho firoboroboan'ny literatiora ao amin'ny firenena. Amin'ity resadresaka manaraka ity, hozaraintsika eto ny fijerin'i Guillermo ireo mpanoratra vaovao izay nandoko ny endrikendriky ny fitantarana Venezoelana vaovao.
Mikasika ireo mpanoratra, mahita aho fa mahafinaritra ny mahita taranaka samihafa mamoaka zavatra maro mahaliana. Nandritra ny fotoana nijanonako tany Caracas, teo amin'ny taona 2007 sy 2010, gaga aho nahita ny endriky ny fampiratiana, ny famakianteny sy ireo hetsika hafa momba ny literatiora. Nisy fiantraikany tsara teo amiko ny fihaonako tamin'ilay mpanao tononkalo Rafael Cadenas raha iny handeha hitady boky tao amin'ny trano fivarotam-boky iny aho ka nampandroso ahy tokoa ny fahitana azy amin'ny hetsika literatiora ao Caracas. Somary menamenatra aho tamin'ny voalohany raha nahita azy niaka-tsehatra, tena zava-dehibe tamiko tokoa ny haisorany.
Nangataka tamin'i Antonio ihany koa izahay mba hanome famantarana vitsy mikasika ireo olona sasany nahatonga izany “firoboroboana” izany. Hoy izy nilaza taminay:
Maro be ireo mpanoratra Venezoelina ankehitriny izay hitako fa mahatalanjona. Ara-tantara, maro be ireo haisoratra efa nivoaka izay tsy dia arako firy. Anisan'ny kalaza indrindra vao haingana ohatra i Carlos Ávila, Mujeres recién bañadas (Mondadori, 2009), Rodrigo Blanco Calderón, Una larga fila de hombres (Monte Ávila Editores, 2005), Dayana Fraile, Granizo (El perro y la rana, 2011), Ana García Julio, Cancelado por lluvia (Monte Ávila Editores, 2005), Liliana Lara, Los jardines de Salomon (Universidad de Oriente, 2008), Mario Morenza, Pasillos de mi memoria ajena (Monte Ávila Editores, 2008) ary Gabriel Payares, Cuando bajaron las aguas (Monte Ávila Editores, 2008). [Na dia izany aza anefa,] misy ny olana lehibe: Tsy ahitana boky Venezoeliana any ivelany. Tsy mba mivezivezy mankany Amerika Latina, na eto Etazonia ny boky.
Ary mikasika ny ambaindainy sy ny fifandraisana amin'ny literatiora, hoy i Guillermo nanambara:
Tsy dia mahita fahasamihafana loatra aho eo amin'ireo mpanoratra tantara sy ireo izay nahasarika ahy tao Etazonia. Mampiseho fisarihana midadasika ny fehin-kevitra amin'ny literatiora, toy ny avy any amin'ilay Espaniola Enrique Vila-Matas hatramin'ny Venezoeliana Teresa de la Parra, eo koa ny Amerikana-Avaratra David Foster Wallace…
Farany, hoy izy nanampy:
Mino aho fa tokony ahafantatra ireo mpanoratra tantara ny mpamaky ao anatin'ny firenena sy ny any ivelany. Manome antsika ny tsirony amin'ny fomba samihafa izy ireo sy ny izay mety hoavin'ny literatiora Venezoeliana rahampitso. Mankafy literatiora izy ireo, saingy ny tena zava-dehibe, manoratra tantara manambara mazia sy tononkalo izay matetika miseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Azonao jerena ao amin'ny bilaogin'i Guillermo Venepoetics ny vaovao fanampiny mikasika ny literatiora Venezoeliana, ary koa ireo dikanteny sasany notontosain'i Guillermo tamin'ny Ramos Sucre, .